Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Ndị na-egwu bọọlụ Oceania Harry Kewell Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
LB na-egosi Full Story of a football footballius kasị mara aha na aha njirimara; 'Harry Kool'.
Anyị Harry Kewell Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Harry Kewell bụ onye na-eruteghị ike ya niile ma e jiri ya tụnyere nke a Lionel Messi na C. Ronaldo.
Gị, ọ bụ ihe nnọchianya dị mkpa nke ịrị elu Australia na mba ụwa. Ugbu a na-ebutụbeghị, ka anyị bido.
Harry Kewell Childhood Story - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Kewell na 22 Septemba 1978 na Sydney na nna nna Bekee, Rod Kewell na nne Australia, Helen Kewell.
Harry toro na-akwado Liverpool na bọlbụ nke mbụ na Bekee. Ọ bụ Liverpool mere ka ọ nwee mmasị na bọl.
Enye ama ọtọn̄ọ ufọkn̄wed esie ke School Smith School na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na St. Johns Park High School tupu ịkwaga na Westfield Sports High School.
N'oge ya na Westfields Sports High School, Kewell na-egwuri egwu na ọkwa ọkwa maka ụlọ akwụkwọ na asọmpi egwuregwu.
Na 15 afọ, Harry abụrụ aha ezinụlọ na Australian football. Nke a bụ mgbe ọtụtụ malitere ịhụ ya n'anya. Nke a bụ mgbe aha aha 'Harry Kool', gbagote.
Onye ọ bụla lere ya anya tolitere ka ọ bụrụ onye na-ama egwuregwu maka nrọ ha.
Ndụ Harry Kewell:
Harry Kewell mụrụ nna nna Bekee bụ Rod Kewell na nne Australia bụ Hellen Kewell.
Ọ na-echebe ha site na mgbasa ozi n'ihi na enweghị ozi gbasara ha na ịntanetị. Ha bi na Sydney dị ka n'oge ederede.
Banyere Sheree Victoria Murphy - Nwunye Harry Kewell:
Harry lụrụ onye a ma ama. Ọ dịghị onye ọzọ karịa onye na-eme ihe nkiri ncha Britain bụ Sheree Murphy.
Sheree Victoria Murphy mụrụ na 22nd nke August 1975 na Stoke Newington, n'ebe ugwu London. Ọ bụ nwa etiti na naanị nwa nwanyị n'ime ezinụlọ nwere ụmụ ise.
Ọ zutere ma hụ Harry Kewell n'anya na ụlọ oriri na ọ popularụ Majụ a ma ama na Majestyk na Leeds, afọ 2000. Mgbe ha na-akpakọrịta ruo afọ 3, ndị abụọ ahụ kpebiri ka ha kee eriri. Ha lụrụ na Las Vegas na May 2003.
Harry na Sheree nwere ụmụ anọ, ụmụ nwanyị atọ na otu nwa nwoke. Dolly mụrụ na 14 Jenụwarị 2012, a mụrụ Ruby na 17th ụbọchị June 2003 mgbe Matilda mụrụ na 19th nke March, 2008 na Taylor (nwa nwoke) amụrụ na 2001.
Ọ bụ onye na-eme ihe nkiri Bekee na onye na-egosi telivishọn, nke a maara nke ọma maka ọrụ ya dị ka Tricia Dingle na opera ncha ITV Emmerdale na Eva Ike na Channel 4 ncha opera hụrụ di ya n'anya n'ezie.
A na-ahụkarị ha ka ha na-agbatị ma na-ekiri ogologo egwuregwu tennis na egwuregwu bọl.
Harry Kewell Biography Eziokwu - Okwu na Onye Ọrụ:
Ọ chụpụrụ onye na-elekọta aha ya na mbido 2013 mgbe ọ hapụsịrị ya na-enweghị otu egwuregwu.
Tupu mkpebi ya, ọtụtụ na-ezo aka na ha dị ka ndị Australia nwere mmekọrịta kachasị ọkpụkpọ-njikwa na egwuregwu Australia. Partzọ nkewa ha juru ọtụtụ ndị maara ha anya.
"Achọrọ m Harry ka ọ bụrụ ọdịmma kacha mma n'ọdịnihu ma ọ bụ ihe obi ụtọ iso ya rụọ ọrụ," Mandic kwuru si Paris. Nkewa ahụ yiri ka ọ ga-enwe mmekọrịta udo, agbanyeghị na ekwenyere na ụzọ ahụ ekwenyeghị banyere ọdịnihu Kewell.
Harry Kewell Biography Eziokwu - Aha otutu:
A ezi ihe banyere Harry Kewell bu na a na-etu ya "Buyucu Harry" in Turkish nke pụtara “Harry Ọkachamara”.
Nickname a sitere n'ike mmụọ nsọ Harry Potter. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị otu egwuregwu ndị ọzọ kpọrọ ya Oz Buyucusu na asụsụ Turkish pụtara Ọkachamara nke Oz.
Harry Kewell Untold Biography Eziokwu - Ọrụ Nlekọta Football:
Ọ na-egwuri egwu na New South Wales nke Ndị Ntorobịa na-anọchi anya 13 n'okpuru 15 Marconi Stallions ìgwè, nke Stephen Treloar zụrụ, mgbe ọ na-aga ọzụzụ ndị ọzọ pụrụ iche na NSW Junior Soccer Academy, nke David Lee nyere aka.
Mgbe ọ dị afọ 14, Kewell gara Thailand, andtali na England na ndị otu Marconi n'okpuru-afọ 14 nke meriri akara steeti ugbu a.
Ndị otu ahụ gwuru egwuregwu megide otu egwuregwu nke obere Milan, yana akụkụ ọmụmụ ọrụ na England.
Nke a bụ oge mbụ Kewell na-apụ na mba ahụ mana nyere ya uto mbụ ya na football na Europe, ebe ọ gara egwuregwu Premier League na nke mbụ ya dị ka onye nkiri.
Mgbe ọ dị afọ 15, e nyere Kewell ohere ịlaghachi England na ikpe Mbụ football football Leeds United ruo oge izu anọ dịka akụkụ nke Nnukwu Nwanna Movement na Australia.
Kewell ji ọdịnihu ya gaa England Socceroo onye otu Brett Emerton. Ha abụọ nwere ihe ịga nke ọma n'oge ule ha na Leeds, agbanyeghị, naanị Kewell nwere ike iburu onyinye klọb ahụ n'ihi nketa nna nna ya nke Bekee, nke mejupụtara visa chọrọ.
A na-akpọ Kewell PFA Young Player of the Year na 2000 wee nata ihe mgbaru ọsọ 63 na 242 anya maka Leeds tupu ya abanye na Liverpool na 2003.
Kewell kelere Leeds United maka inye ya ohere na Liverpool Premier League ike Liverpool ebe ọ meriri UEFA Champions League na 2005 na FA Cup na 2006.
Ọ gwụchara egwuregwu ya na Galatasaray na Turkey, Qatar na obodo ya Australia.
Harry Kewell Untold Biography Eziokwu - Ọrụ Nlekọta:
A kpọrọ onye mbụ Leeds na Liverpool kpakpando onye njikwa nke Njikọ nke abụọ Crawley Town. Nke a mere na Mee 2017. Ọtụtụ kwenyere na ọ bụ nzọụkwụ mbụ ya na njikwa.
Akụkọ na-egosi na rue Mee 2017, Harry na-arụ ọrụ ugbu a na UEFA Pro License na-enye ọzụzụ ikike ma Warren Feeney, onye bụbu onye Northern Ireland.
Nke a site na itinye aka pụtara na ọ ga-abụ onye nchịkwa otu ụbọchị UEFA na-eme egwuregwu klọb. Ọdịnihu doro anya na ime ime Harry.
Harry Kewell Biography - Onye mmeri nke Alex Tobin Medal:
A nnọọ eziokwu na-akpali mmasị banyere Harry Kewell bụ na ọ bụ onye mmeri nke Alex Tobin Medal. A na-ewere nrite a ka ihe onyinye kachasị ugwu maka onye ọ bụla na-agba ọsọ n'Australia iji merie.
Ọ nwetara onyinye a mgbe ọ mara ọkwa ezumike nká ya dị ka onye na-egwu egwuregwu n'afọ 2016.
Onye Ntorobịa nke kachasị nta na mmalite nke Australian Football:
Eziokwu ọzọ dị egwu banyere ya bụ na ọ na-edekọ ndekọ nke ịbụ onye ọkpụkpọ kachasị nta na-anọchite anya Australia na egwuregwu mba.
Naanị mgbe ọ dị obere nke 17 afọ na ọnwa 7, ọ na-egwuri egwu megide Chile wee jide nsọpụrụ a maka onwe ya.
Kewell bụ ọdụdụ nwa nke Socceroos mgbe ọ gbara bọọlụ maka Australia na 1996 megide Chile mgbe ọ dị afọ 17 na ọnwa asaa.
O sitere na otutu ndi anakpo Ochichi nke Australia. O doro anya, Harry Kewell bụ onye ndu nke ọgbọ a.
Ndị na-eto eto na-asọpụrụ maka ndị Australia. Ọ bụ onye England na-eto eto PFA nke afọ na 1999-2000 ma kpọọ ya na otu PFA nke afọ.
N'akụkụ Socceroo Mark Viduka, Kewell nọ na-agba ọsọ na-agba ọsọ na-agba ọsọ na Leeds United.
N'oge ụfọdụ, ha bụ ihe omume kachasị njọ nke Premier League, na-eburu Leeds na-atụ egwu nke UEFA Champions League nke ikpeazụ na 2000-01.
N'azụ ihe ịga nke ọma, Leeds etinyela onwe ya n'ime mbibi n'ịchụ otuto. Ọpụpụ Kewell si na klọb ahụ ka bụ ọnya na-emeghe na Yorkshire. Ọ dịghị onye mejupụtara ọnọdụ ya ruo taa.
Nwoke Mara Mma:
Ọbụna nwunye ya Sheree Murphy ekwupụtala na alụm di na nwunye ya na Harry anaghị abụ mgbe niile.
Onye nwanyị na-eme ihe nkiri ekpughere na n'oge gara aga, ụmụ nwanyị ga-akụ di ya mma n'ezoghị anya n'ihu ya, na-eduga n'ahịrị n'etiti ya na Harry nwere nnukwu mmasị.
Harry Kewell Biography - Australian nke abụọ iji merie onyinye egwuregwu na World Cup:
Eziokwu ọzọ dị ịtụnanya banyere ya bụ na, ọ bụ naanị onye ọkpụkpọ bọọlụ Australia nke abụọ meriri Onyinye Egwuregwu Man na egwuregwu World Cup.
Mgbe ọ na-egwu egwu megide Croatia, o meriri na 79th nkeji iri abuo nke Australia choro ka o we banye na-esote onu ogugu.
Oceania bọọlụ nke onyinye afọ:
Otu eziokwu dị ịtụnanya banyere ya bụ na ọ bụ onye mmeri nke Oceania Footballer of the Year Award.
A na-ahụta onyinye a dị ka otu n'ime onyinye a na-asọpụrụ nke ọma na egwuregwu bọọlụ. Ọbụna ihe na-adọrọ mmasị karị bụ na o ritela onyinye a ugboro atọ na ọrụ ya. Afọ ndị o jidere onyinye a gụnyere 1999, 2001 na 2003.
Harry Kewell Bio - Ọrụ Nlekọta Ahụhụ:
Mana eziokwu dị mwute bụ na n'èzí mmiri ndị a, Kewell nwere ike ịkwụkwasị akpụkpọ ụkwụ ya n'ụbọchị ọ hapụrụ Leeds na 2003.
Ogologo mmerụ ahụ nke jupụtara n'ọrụ ya emewo ka ọtụtụ ndị kpọọ ya- onye ọkpụkpọ kachasị egwu nke Australia mere ka ọ ghara ịdị ndụ ịgba ụgwọ ịgba ụgwọ ụwa.
Harry Kewell ebupụtara dị ka akụkụ nke ụlọ ọkụ na-ere ahịa na mbupụ ọpụpụ. Ọ sonyeere Liverpool mana nhụjuanya merụrụ ya ahụ, na-adịghị ebuli elu nke dugara na mkpesa £ 20 + nde site na Inter Milan.
Ndi Australian si na njedebe nke Njikọ Njikọ ikpeazụ na 2005 na ihe ngosi FA Cup otu afọ mgbe e mesịrị; mmerụ ahụ nke ikpeazụ, akwara agbaji agbaji, mere ka Kewell nọrọ n'akụkụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ.
Ọ kpọlitere ọrụ ya na Galatasaray nke Turkish mana nsogbu ahụ ike nọgidere na-egbochi ya. Ọ fọrọ afọ atọ na ọkara ọrụ ya na Liverpool n'ihi mmerụ ahụ.
Onye ọrụ Harry Kewell (Bernie Mandic) akpọrọ Liverpool otu "ihe ihere" ma kwuo na enweghị ike ha bibiri ọrụ onye ọkpụkpọ ahụ.
Ahịa nke Australia